मुख्य प्रशिक्षका लियोनेल स्कालोनीले स्टार फरवार्ड लियोनेल मेस्सीलाई टोलीमा समावेश गर्दै ! – " कञ्चनजंगा News "
मुख्य प्रशिक्षका लियोनेल स्कालोनीले स्टार फरवार्ड लियोनेल मेस्सीलाई टोलीमा समावेश गर्दै !
No Comments on मुख्य प्रशिक्षका लियोनेल स्कालोनीले स्टार फरवार्ड लियोनेल मेस्सीलाई टोलीमा समावेश गर्दै !
मुख्य प्रशिक्षका लियोनेल स्कालोनीले स्टार फरवार्ड लियोनेल मेस्सीलाई टोलीमा समावेश गर्दै उनकै कप्तानीमा २३ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका छन् । प्रशिक्षक स्कोलानीले मंगलबार राति ४० खेलाडीबाट २३ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन् ।
मेस्सीले २०१६ को कोपा अमेरिका फाइनलमा पराजित भएपछि राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला अर्जेन्टिना पेनाल्टी सुटआउटमा चिलीसँग पराजित भएको थियो । तर, त्यसपछि अर्जेन्टिनी सरकार र फुटबल समर्थकको आग्रहमा उनी पुनः राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका थिए । रसिया विश्वकप समेत खेलेका मेस्सीले त्यसयताका केही खेलमा भने विश्राम लिएका थिए ।
२३ सदस्यीय टोलीमा यसपटक पाउलो डिबाला र सर्जियो अगुएरोले स्थान बनाउन सफल हुँदा अर्काे स्टार फरवार्ड मौरो इकार्डीले टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन् । इटालियन क्लब इन्टर मिलानका कप्तान समेत रहेका उनले राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अगुएरो रसिया विश्वकपपछि पहिलोपटक टोलीमा स्थान बनाउन सफल भए ।
कोपा अमेरिका जुनमा ब्राजिलमा आयोजना हुदैछ । समूह ‘बी’ मा रहेको अर्जेन्टिनाले कोलम्विया, पाराग्वे र पाहुना टोली कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
गोलरक्षक– फ्रान्को अर्मानी (रिभर प्लेट), अगस्टिन मार्चेसिन (क्लब अमेरिका), इस्टेब्यान एन्ड्राडा (बोका जुनियर्स)
डिफेन्डर – निकोलस ओटामेन्डी (म्यानचेस्टर सिटी), रामिरो फुनेस मोरी (भिल्लारियल), मार्काेस अकुना (स्पोर्टिङ लिस्वन), निकोलस टागलियाफिको (आयाक्स), जर्मन पेज्जेला (फ्लोरेन्टिना), रेन्जो साराभिया (रेसिङ), जुवान फोयथ (टोटेनहम)
मिडफिल्डर – एन्जल डि मारिया (पीएसजी), रोबर्टाे पेरेरा (वाटफोर्ड), जियोभानी लो साल्सो (रियल बेटिस), लियान्दो पाराडेस (पीएसजी), रोड्रिगो डि पल (उडिनेसी), गुइडो रोड्रिग्वेज (क्लब अमेरिका), इजेक्वेल पालासियोस (रिभर प्लेट)
फरवार्ड – लियोनेल मेस्सी (अर्जेन्टिना), सर्जियो अगुएरो (म्यानचेस्टर सिटी), पाउलो डिबाला (युभेन्टस), लौटारो मार्टिनेज (इन्टर मिलान) र माटियस सुवारेज (रिभर प्लेट) एजेन्सी
← सगरमाथाको उचाइ नाप्ने यन्त्र जीएनएनएस (ग्लाेबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम सर्भे) जीपीएस राखीयो → पूर्वीनवलपरासीमा गए रातीको हुरीसँगै आएको असिना पानीसहित हावाहुरीले दर्जनौं घरहरुमा क्षति!